စီရော်နယ်လ်ဒိုဆိုတာ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေကို ချိုးဖြတ်တဲ့နေရာမှာ ဆရာတစ်ဆူပါပဲ
စီးရီးအေမှာ (၈၉)နှစ်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ စံချိန်တစ်ခုကို Cristiano Ronaldo ချိုးဖြတ်နိုင်မလား
25 Aug 2018 . 3:38 PM
စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ဆိုတာ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေကို ချိုးဖြတ်တဲ့နေရာမှာ ဆရာတစ်ဆူပါပဲ။ မန်ယူ၊ ရီးယဲလ်တို့မှာ ကစားခဲ့တုန်းကလည်း အမျိုးမျိုးသော စံချိန်တွေကို ချိးဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် စီးရီးအေမှာ (၈၉)နှစ်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ စံချိန်တစ်ခုက စောင့်ကြိုလို့နေပါပြီ။ အဲဒါကတော့ ၁၉၂၉ ခုနှစ်တုန်းက စီးရီးအေဂန္ထ၀င်ကစားသမား ရော့ဆက်တီ Rossetti တင်ရှိခဲ့တဲ့ စီးရီးအေတစ်ရာသီအတွင်း သွင်းဂိုးအများဆုံး စံချိန်ပါပဲ။ ရော့ဆက်တီဟာ တိုရီနိုအသင်းမှာ ကစားခဲ့တုန်းက ၁၉၂၈-၂၉ ရာသီမှာ (၃၆)ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့ပြီး အဲဒီစံချိန်ကို အခုထိ ဘယ်သူမှ မချိုးဖြတ်နိုင်သေးဘူး။
အခု အေစီမီလန်အသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ နာပိုလီတိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဟီဂွါအင် Higuain တစ်ယောက်ပဲ အဲဒီစံချိန်ကို အမီလိုက်နိုင်ဖူးတယ်။ ဟီဂွါအင်က နာပိုလီကစားသမားဘ၀ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ (၃၆)ဂိုး သွင်းယူပြီး ရော့ဆက်တီရဲ့ စံချိန်ကို လိုက်မီခဲ့တာပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ စီးရီးအေ ပရိသတ်တွေ အားလုံးက ရော့ဆက်တီရဲ့ စံချိန်ကို စီရော်နယ်လ်ဒို ချိုးဖြတ်နိုင်မလားဆိုပြီး စောင့်ကြည့်နေကြပါပြီ။ ဘွတ်ကီဒိုင်ဖြစ်တဲ့ Betfair ကတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်ကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံးရာသီမှာ ရော့ဆက်တီရဲ့ စံချိန်ကို ချိုးဖြတ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး ၆ လေး/၁လေး နဲ့ လောင်းကြေးဖွင့်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ရီးယဲလ် ကစားသမားဘ၀မှာတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ရာသီအလိုက် သွင်းဂိုးမှတ်တမ်းက ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ။ ဂိုး(၄၀)နဲ့အထက် သွင်းယူခဲ့တာက (၃)ရာသီရှိခဲ့တဲ့အပြင် ရီးယဲလ်ကစားသမား (၉)နှစ်တာကာလမှာ တစ်ရာသီ ပျမ်းမျှသွင်းဂိုးက (၃၄.၅)ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ အီတလီမြေမှာလည်း သူ့ရဲ့ ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ကောင်းတွေကို ဆက်ထိန်းပြီး (၈၉)နှစ်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ ရော့ဆက်တီရဲ့ စံချိန်ကို ချိုးဖြတ်နိုင်မလားဆိုတာတော့ . . .
Photo:The National,The Sun
စီးရီးအမှော (၈၉)နှဈကွာမွငျ့နပွေီဖွဈတဲ့ စံခြိနျတဈခုကို Cristiano Ronaldo ခြိုးဖွတျနိုငျမလား
စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ဆိုတာ စံခြိနျမှတျတမျးတှကေို ခြိုးဖွတျတဲ့နရောမှာ ဆရာတဈဆူပါပဲ။ မနျယူ၊ ရီးယဲလျတို့မှာ ကစားခဲ့တုနျးကလညျး အမြိုးမြိုးသော စံခြိနျတှကေို ခြိးဖွတျနိုငျခဲ့တဲ့ စီရျောနယျလျဒိုအတှကျ စီးရီးအမှော (၈၉)နှဈကွာမွငျ့နပွေီဖွဈတဲ့ စံခြိနျတဈခုက စောငျ့ကွိုလို့နပေါပွီ။ အဲဒါကတော့ ၁၉၂၉ ခုနှဈတုနျးက စီးရီးအဂေန်ထဝငျကစားသမား ရော့ဆကျတီ Rossetti တငျရှိခဲ့တဲ့ စီးရီးအတေဈရာသီအတှငျး သှငျးဂိုးအမြားဆုံး စံခြိနျပါပဲ။ ရော့ဆကျတီဟာ တိုရီနိုအသငျးမှာ ကစားခဲ့တုနျးက ၁၉၂၈-၂၉ ရာသီမှာ (၃၆)ဂိုးအထိ သှငျးယူခဲ့ပွီး အဲဒီစံခြိနျကို အခုထိ ဘယျသူမှ မခြိုးဖွတျနိုငျသေးဘူး။
အခု အစေီမီလနျအသငျးမှာ ကစားနတေဲ့ နာပိုလီတိုကျစဈမှူးဟောငျး ဟီဂှါအငျ Higuain တဈယောကျပဲ အဲဒီစံခြိနျကို အမီလိုကျနိုငျဖူးတယျ။ ဟီဂှါအငျက နာပိုလီကစားသမားဘ၀ ၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ (၃၆)ဂိုး သှငျးယူပွီး ရော့ဆကျတီရဲ့ စံခြိနျကို လိုကျမီခဲ့တာပါ။ အခုအခြိနျမှာတော့ စီးရီးအေ ပရိသတျတှေ အားလုံးက ရော့ဆကျတီရဲ့ စံခြိနျကို စီရျောနယျလျဒို ခြိုးဖွတျနိုငျမလားဆိုပွီး စောငျ့ကွညျ့နကွေပါပွီ။ ဘှတျကီဒိုငျဖွဈတဲ့ Betfair ကတော့ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ဂြူဗငျတပျဈကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံးရာသီမှာ ရော့ဆကျတီရဲ့ စံခြိနျကို ခြိုးဖွတျလိမျ့မယျဆိုပွီး ၆ လေး/၁လေး နဲ့ လောငျးကွေးဖှငျ့လိုကျပွီဖွဈပါတယျ။
ရီးယဲလျ ကစားသမားဘဝမှာတော့ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ ရာသီအလိုကျ သှငျးဂိုးမှတျတမျးက ကွောကျခမနျးလိလိပါပဲ။ ဂိုး(၄၀)နဲ့အထကျ သှငျးယူခဲ့တာက (၃)ရာသီရှိခဲ့တဲ့အပွငျ ရီးယဲလျကစားသမား (၉)နှဈတာကာလမှာ တဈရာသီ ပမျြးမြှသှငျးဂိုးက (၃၄.၅)ရာခိုငျနှုနျးအထိ ရှိခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ စီရျောနယျလျဒိုအနနေဲ့ အီတလီမွမှောလညျး သူ့ရဲ့ ဂိုးသှငျးစှမျးရညျကောငျးတှကေို ဆကျထိနျးပွီး (၈၉)နှဈကွာမွငျ့နပွေီဖွဈတဲ့ ရော့ဆကျတီရဲ့ စံခြိနျကို ခြိုးဖွတျနိုငျမလားဆိုတာတော့ . . .
by Ko Kyue . 1 min ago